Anya mmiri nke Madonna n’ụlọ Bettina Jamundo | Ilblogdellafede
Anya mmiri nke Madonna n’ụlọ Bettina Jamundo
Na Cinquefrondi, na ndịda Italytali, anyị na-ahụ ebe egosipụtara. Oriakụ Bettina Jamundo bi n'ụlọ dị mma na mpaghara Maropati. Ọ bụ ụlọ ọrụ ebe azụ, ma bụrụkwa nnukwu onye na-efe Meri, ọ na-akpọkọtakwa obere ndị agbata obi n'ụlọ ya ikpe ekpere Rosary. Ọ bụ n’afọ 1971, mgbe ihe ndị pụrụ iche malitere ime na Cinquefrondi.
N'ime ụlọ ahụ kpọgidere foto nke obi Mary na-egbu mgbu. N’abalị iri abụọ na isii n’ọnwa Ọktọba, n’ihe dị ka elekere iri nke isi ụtụtụ, ụmụ nwanyị abụọ na-eleta Oriakụ Bettina Jamundo na otu n’ime ha hụrụ anya mmiri abụọ na onyonyo nke Madonna, na-acha, dị ka mkpụrụ osisi pel, nwanne nwanyị nke ọzọ ahụ hụkwara. Ebere ahụ were awa abụọ, ruo ehihie. Anya mmiri na-asọ site na ibe ya, site na nkpuchi ahụ ruo na ala nke etiti ahụ. Themụ nwanyị ahụ gbara mbọ idobe ihe merenụ na nzuzo, mana echeghị na ọ ga-abụ: otu ụbọchị na November 26, ndị Cinquefrondi niile maara anya mmiri. Ọtụtụ bịara hụ ọrụ ebube ahụ. Ihe a meghachiri n’isi ya ugboro iri. Ya mere, ụbọchị iri abụọ, anya mmiri adịghị ahụ. Ka oge na-aga, onyinyo ahụ kwara ọzọ. A chịkọtara anya mmiri ahụ na nsị, sitekwa na ha, a gwọrọ ọrịa ụfọdụ na-enweghị ọgwụgwọ.
Na Septemba 15, 1972, bụ mmemme oriri-ume nke asaa nke Mary, ọbara hụrụ nke izizi jiri bọọlụ owu. nke anya mmiri nke Madonna dara. Na mbu, anya mmiri na-agbazi ka ọbara na owu, mana, tupu izu uka ato 1973, obara awara si na obi nne anyi noo. Ọbara a were awa atọ.
Na Julaị 16, 1973, Bettina nụrụ ka otu olu na-asị: Egwu mgbe ahụ “A na-ebe anya ọ bụla bụ okwuchukwu”.
Ma nnukwu ọkụ pụtara na windo ahụ. Onye ọhụ ụzọ ahụ biliri hụ n'èzí, osisi, nwere diski na-acha ọbara ọbara, dị ka anyanwụ mgbe ọ na-awa. Mgbe ogologo oge gasịrị, nnukwu mkpụrụedemede pụtara na diski ahụ. Ha kwuru: "Jizọs, Onye mgbapụta bụ n’elu obe, Meri bere akwa". N'ikwu ya, ihe ọ pụtara bụ: mmadụ na-echeta na Kraịst nwụrụ dịka obe iji gbapụta ụwa, mana mmadụ echefuru, yabụ, Meri tiri mkpu.
← Na post gara aga Gara aga post:Saint John Vianney, Saint nke ụbọchị maka Ọgọst 4
Ọzọ Post → Post ozo:Nkwuwa okwu na Santa Rita maka ihe na - agaghị ekwe omume